Na-ebu fechaa, inogide imewe.
Full-Kechie na-ebu PC nrutu.
Mfe ịgbanwe usoro kwesịrị ekwesị.
Ike ike jụrụ
Typedị ngwaahịa Okpu igwe igwe kwụ otu ebe
Nọmba nlereanya Moutain igwe kwụ otu ebe okpu VM202
Nkà na ụzụ EPS + PC in-ebu
Njirimara Igwe ikuku siri ike, nkasi obi isi dabara adaba, imepụta ejiji
Ịgbatị nhọrọ mbughari visor na bolts
Nkedo DACRON POLYESTER
Ọdịmma usoro Naịlọn ST801 / POM / Ihe ntanetị
Site na nrịgo elu ruo ogologo oge, usoro nka na ụzụ, okpu agha VM202 na-akpali ịnyịnya gị n'agbanyeghị ebe ụzọ ahụ na-eduga gị. Ya kọmpat udi na-enye miri, obi ike mkpuchi na kemeghi kwesịrị ekwesị usoro akpụkpọ ụkwụ ventilashion ma rụọ ọrụ kwesịrị ekwesị. Na mgbakwunye na okpu okpu mkpuchi a dị ebube, ọ na-eji hydrophilic, mgbochi mgbochi brow pad nwere ike ịmịnye okpukpu iri n'arọ. Okpu agha nke ugwu maka ịnyịnya n'okporo ụzọ nwere ụdị njirimara dị ala, nnukwu mkpuchi, ikuku ikuku na ikuku siri ike. Njikere maka ihe ọ bụla site na ịgagharị na ịgagharị na -agagharị n'okporo ụzọ ịnyịnya. Okpu igwe kwụ otu ebe na-eme ka ị dị jụụ ma nwee ntụsara ahụ, gbakwunye ma ọ bụ visor na-ewepụ ewepụ nke na-egbochi anyanwụ, mmiri ozuzo, ahịhịa na alaka.
Full-Kechie Na-ebu polycarbonate shei na EPS liner iguzogide dents na dings na-eme ka ihe ezigbo mma. Mkparịta ụka mmekọrịta na obere ọdịiche na-eme ka usoro dị ọcha dị ọcha ma ọ bụrụ na ọ ga-achọ ka elu teknụzụ dị elu karịa nke EPS na agụụ na-akpụzi ngwa ọrụ.
Ihe mkpuchi dị elu nke na-eme ka ntutu dị nkụ ma dị jụụ n'oge ọ na-agba ịnyịnya ma na-enye nkasi obi dị mma na ventilashị enwegoro, anyị mepụtara ọtụtụ pad na ihe ọhụrụ na teknụzụ maka nhọrọ ODM: Silicone padding, antibacterial / achara, PC / PP lamination na TPU enweghị nkebi padding.
Okpu agha a kapịrị ọnụ na-emegharị eriri dị fechaa nke nwekwara ike igosi ya na bandị na-atụgharị uche, sublimation na mpempe akwụkwọ silicone, anyị na-enye ndị ọzọ eriri nhọrọ nke ịhazi: ọtụtụ ịkpa akwa, akwa na mgbochi eriri.
Ngwa ngwa hapụ ITW na ihe Derlin POM iji mee ka njigide na nnwale ntụgharị iji kwado nchekwa nke okpu agha.
Mgbanwe ndị ahụ dabara na ngwa ngwa ma dịkwa mfe ịme, enwere ike ịhazi usoro dabara adaba na ọnọdụ atọ ma mee ka nkasi obi kachasị mma mgbe mgbanwe ndọtị na ntụgharị ntụgharị roba, imepụta ihe dị larịị na ST801 na POM maka akụkụ dị egwu na-eme ngwa ngwa siri ike, ihe kwesịrị ekwesị usoro nwere ike dochie anya ngwa ngwa mgbe ogologo oge na-eji.
Nke gara aga: MTB Igwe okpu igwe VM203
Osote: E-Bike skuta V01
Okpu Igwe Igwe Igwe
Okpu agha obodo Urban VU102
Helzọ okpu okpu VC301